ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် ပျဉ်းမနားတွင် ရဲအရာရှိတစ်ဦး မီးရှို့သေဆုံး
Naypuidaw Ye(police:military replace to police), really good policemen were in hell. Those military changed policemen encouraged and cooperated the criminers and taking big parts ( sometime almost) of shares. Gradually thief's were no of
profit. All those things were known by origional policemen of crime intelligentsia and crime preventing policemen. Old peoples of them are even scotlandyart trained. The best officers of them were killed in 8888 uprising because they knew too much of policemilitarymen's crimes. When they died they lost their own mind by mental drug and induced their mind to commit poisoning to drinking water of demonstraters.
Dec 02, 2012 02:47 AM
အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် လူကြီးတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေဘဲယူပါတယ်။ ယိုးဒယားနိုင်ငံ ယာယီ ပတ်စပို့ (၅)နေရာကို အလှည့်ကျလွှတ်တော့ တပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးခန်းက (၃)ဦး ဘန်ကောက်၊ ရေးထောက်က (၅)ဦး (၅)နေရာ၊ ကျန်တဲ့ဌာနကလူတွေ ကျတော့ သူတို့မလို ချင်တဲ့နေရာတွေ၊ အဲဒီကောင်တွေအားလုံး ရန်ကုန် ပတ်စပို့ရုံးနဲ့ နေပြည်တော် တစ်လစီတာဝန်ကျတွေရဲ့ချည်းပါဘဲ၊ ထမင်းစားတဲ့ဦးနှောက်နဲ့ စီမံခန့်ခွဲဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအောက်ခြေမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလူကြီးတွေစိတ်မဝင်စားတာကြာလို့ပါ။၂၀၀၄ကတည်းကပျက်စပြုတဲ့တပ်ဖွဲ့မှာဒီ(၁)ယောက်သေတာနဲသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အခြားဆင့်တွေဆိုသေချင်တာကြာလှပြီ။အကြံဖန်ဆိုငါဆရာ အလုပ်ဆို၇င်မင်းတိုံ့လုပ် ဆိုတဲ့လူတွေရောက်ကတည်းကပါ။တပ်ဖွဲ့မှူးကြီးသိသင့်တာလည်းကြာပါပြီ
Sep 05, 2012 03:36 AM
Sep 05, 2012 03:31 AM
ရဲသားေလး နေရပ်- ျမနမာျပည္ :
လံုေလ့သု နေရပ်- လႊတ္ေတာ္လခရ :
နှမျောမိပါတယ်၊ သူ့လိုသာ လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ ဥပေကာ ပြုမှုတွေနဲ့ ဘာမှ လှည့်မကြည့်တဲ့၊ တာဝန်အရှိဆုံး တပ်ဖွဲ့မှူးကို အဖော်ခေါ်သွားလိုက်မယ်၊ အဲဒါမှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ကြမှာလေ
Sep 02, 2012 02:46 AM
မ်ိဳးမ်ိဳး နေရပ်- ပ်င္းမနား :
ပျင်းမနား မှာအဲဒီ ဘုန်းကြီးကျောင်းနာမည်မကြားဘူးပါသတင်းမှန်ဟုတ်ရဲ့လား
၀မ္းနည္းသူတစ္ဦး နေရပ်- ရန္ကုန္ :
စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ .......ရဲအုပ် ဆိုတဲ့ ရာထူးကိုစွန့်လွတ်ပြီး လုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ ...ပိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်.....
Sep 01, 2012 08:49 AM
အမည္မသိခ်င္သူ နေရပ်- ျမန္မာႏိုင္ငံ :
ထူးထူးဆန်းဆန်းအမှုပါပဲ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် နောက်အကြောင်းတွေပါသိ ချင်လိုက်တာ၊ စိတ်ဝင်စားလို့ပါ၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး နေရပ်- ေနျပည္ေတာ္ :
ဌာနတွင်းမသမာမှုတွေ၊ ဆရာတပည့်မွေးမှုတွေ၊ လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ်မှုတွေ၊ ဟန်ပြလုပ်နေကြတဲ့ ဘုတ်အစည်းအဝေးတွေ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ၊ ဌာနတွင်းအကြီးကဲများကိုယ်တိုင်က သစ်စာမဲ့စွာနဲ့ မသိကျိုးကျွံပြု နေတာတွေ၊ စတာတွေကို ဖော်ထုတ်ပြီး တရားမျှတမှုကို ဖော်ထုတ်ပေးစေလိုပါတယ်၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေ ကင်းရှင်းဖို့ ဝန်ထမ်းတိုင်းလက်မှတ် ထိုးကြရပေမဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်က လက်ခံနေကြပါတယ်၊
Aug 30, 2012 07:49 PM
မိမိကိုယ်ကိုမီးရှို့သေကြောင်းကြံခဲ့ပါလျင်၊ မသေခင်က သူတိုယ်သူသေကြောင်းကြံစည်လောက်အောင် ၊ဘယ်သူက ၊ဘာကိစ္စအတွက်ဖိအားတွေပေးခဲ့လို့လဲ ၊သူများကသတ်ခဲ့ရင်လဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုဆက်လက်စုံစမ်းပြီးသတင်းဆက်တင်သင့်ပါတယ် ၊ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် ဂမ္ဘီရဆန်ဆန်ပဲံကိုယ်ကာိုယ်ကိုသတ်သေသလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ပဲ ဇာတ်သိမ်းသွားလိမ့်မယ်
Aug 30, 2012 01:09 PM
မြန်မာပြည်က ရဲတွေ အားလုံး အဲသလို သတ်သေသင့်တာ
ေအးေအးေလး နေရပ်- ေရႊဦး :